को हुन् सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरे, कसरी परे पक्राउ ? - Deshko News Deshko News को हुन् सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरे, कसरी परे पक्राउ ? - Deshko News
को हुन् सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरे, कसरी परे पक्राउ ?
सुन तस्करीका मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती उर्फ गोरे चर्चित पूर्वफुटबलर हुन्। मोरङ ११ बाट फूटबल खेल्ने उनी पछि भारतीय सेनामा भर्ती भए। तीन वर्ष काम गरे अनि दुबईको अबुधाबी पुगे। त्यहाँ प्रहरीमा जागिर खाए। पाँच वर्ष दुबई बसे। पछि सुन पठाउने र हुन्डी कारोबारमा लागे।
उनका बाबु नेत्रप्रसाद अवकाशप्राप्त असई हुन्। मोस्ट वान्टेड हुँदाहुँदै पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग नियमित सम्पर्क भएको कुरा छानबिन समितिले पत्ता लगाएको छ। सनमको हत्या भएपछि शवको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि उनले प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरी सल्लाह मागेको खुलेको छ।
पक्राउ परेका निलम्बित एसपी विकासराज खनालले शव ल्याएर गाडी नै त्रिशूलीमा फालिदिनू भनेर सिकाएको फोन रेकर्डसमेत छानबिन समितिले फेला पारेको छ। अभियुक्तले शव धरान र इटहरीको बीचमा जंगलमा झाडीमा गाड्ने तयारी भएको समेत बयान दिएका छन्।
सोमबार दिल्लीको एक होटलमा बसेका गोरेलाई भारतीय प्रहरीकै सहयोगमा नेपालबाट गएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रण लिई सीधै जहाजमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओरालिएको थियो। सोमबार अपराह्नदेखि राति अबेरसम्म गोरेसँग समितिले बयान लियो।
बयान सकिएपछि मंगलबार बिहान साढे पाँच बजे गोरेलाई उनी बस्ने डेरा गौरीघाटमा पु¥याइयो। डेरा पुगेपछि पनि गोरेले आफ्नो ज्यान बचाइदिन प्रहरी टोलीलाई अनुनय गरेका थिए।
उनले भने, ‘प्रहरीले समातेपछि उसले कुनै हस्तक्षेप गरेन। ज्यान जोगाइदिनुपर्यो, सबै बताइदिन्छु भने।’ गोरेले संयुक्त अरब इमिरेट्समा नजमल जनरल ट्रेनिङ कम्पनी खोलेर सुन नेपालतर्फ तस्करी गर्दै आएको ती सदस्यले बताए।
गोरेले प्रहरीलाई गिरफ्तारी दिनुअघि भिडियो खिचेर एउटा अनलाइनमा मिडियामा दिएका थिए, जुन मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा गोरेले सबै सुन तस्करीमा आफ्नो मात्रै नाम आएको भन्दै अन्यको विवरण आउँदै जाने बताएका छन्।
शाक्यको हत्या आफूले नचाहँदा नचाहँदै भएको समेत भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले भिडियोसहितको मोबाइल पनि बरामद गरेको छ। अन्नपूर्णमा खबर छ ।